रोल नं. १३ हुने विद्यार्थी सबैको मृत्यु हुने स्कुल - Chinari Post
जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : १५ अपरान्ह / 2022-05-18 09:15 pm
रोल नं. १३ हुने विद्यार्थी सबैको मृत्यु हुने स्कुल
गुल्मी, सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ । तर गुल्मीको एउटा विद्यालयमा झण्डै ५ दशकदेखि एउटा रोल नम्बर १३ नराखि विद्यार्थीको हाजिरी गर्दै आएको छ । जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ नलेखेको अहिले ४४ वर्ष बढी पुगेको छ ।
विद्यार्थी लगातार मृत्यु भएको भन्दै विद्यालयले कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ लेखिएको छैन । विद्यालयमा भर्ना भई कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने १३ रोल नम्बर भएका बालबालिकाको विभिन्न समयमा मृत्यु भएका कारणले विद्यालयले नै रोल नम्बर १३ लेख्न छोडेको हो ।
विद्यालयका सहायक प्राचार्य युवराज ज्ञवालीका अनुसार रोल नम्बर १३ भएका विद्यार्थीको निधन भएका कारणले रोल नम्बर १३ लेख्न छोडिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयको कक्षा ९ मा १३ रोल नम्बर भएका तत्कालिन अर्खले गाविस ७ भण्डारी टोलका ढुण्डीराज भण्डारीको २०२५ सालमा परीक्षा दिने क्रममा पेट दुखेर मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै दोस्रो पटक २०३० सालमा तत्कालिन तम्घास गाविस ४ का जुनप्रसाद श्रेष्ठको २०३१ सालमा तत्कालिन तम्घास गाविस १ रमेश श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । २०३२ सालमा तम्घास पुरानोबजारका कृष्णप्रसाद पाण्डेयको विद्यालयमै परेको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो ।
विद्यालयमा लगातार विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएका कारण विद्यार्थी अविभावकहरुले कक्षा ९ मा १३ अशुभ भएको भनेका कारण सबैको सल्लाह अनुसार लेख्न छोडिएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक ज्ञवालीले बताउनुभयो । पहिले पहिले १३ रोल नम्बर लेख्ने गरेतापनि हाल भने लेख्न छोडिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । सबैको मनमा अशुभ भन्ने रहेका कारण कसैले पनि १३ रोल नम्बर लेख्न सुन्न नि चाहँदैनन् ।
अप्रिय घटना घटेका कारण अहिल पनि घटना हुन्छ की भन्ने डरले १३ रोल्नम्बर नलेखिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य घनश्यमा पाण्डेयले बताउनुभयो । लगातार ४ जना विद्यार्थीको १३ रोल नम्बर भएका मृत्यु भएको र विद्यार्थीहरुले पनि १३ रोल नम्बर राख्न नचाहेका कारण विगत देखी यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।
कक्षा ९ को रोल नं १३ सधैं खाली हुन्छ सो कक्षामा रोल नम्बर १२ पछि एकैपटक १४ आउँछ । २००९ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हाल उक्त विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ ।
बिज्ञान, शिक्षा बिज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन १२ सय बढी विद्यार्थीहरु पठन पाठन गर्दै आएको विद्यालयले जनाएको छ । जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यालयमा परिचित छ । विद्यालय नमुना विद्यालयको रुपमा छनौट समेत भएको छ ।
विद्यालयमा पढ्न जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत विद्यार्थीहरु आउने गर्दछन् । नेपाल समाचारपत्र बाट,अनिल खत्री
नेपालमा सुनौलो कछुवा भेटियो
नेपालमा सुनौलो कछुवा फेला परेको छ । प्रदेश–२ को जनकपुर उपमहानगर पालिकास्थित खोयर भन्ने स्थानमा सुनौलो ...
मोरङको बेलबारीमा अनौठो माछा भेटियो
मोरङको बेलबारी(६ मा अनौठो प्रजातिको माछा भेटिएको छ । बेलबारीको सोमबारे र बनौलबीच नहरको पानीमा ...
हुरिले विमान उडाउदा बन्यो नयाँ किर्तिमान
तर ठूलो बतासका कारण उक्त विमान ४ घण्टा ५६ मिनेटमनै पुगेको हो। ...
अमेरिकामा देखियो दुईओटा टाउको भएको अचम्मको सर्प
अमेरिकाको न्यूजर्सीस्थित जंगलमा दुईवटा टाउको भएको अनौठो सर्प फेला परेको छ । ...
आफ्नो साइकलले किचेको चल्ला बचाउन पैसा बोकेर अस्पताल पुगेका बालक
साना बालबालिकाहरूको बानी ब्यहोरा ठुला मानिसहरु भन्दा धेरै फरक हुन्छ । उनीहरुको सोच्ने तरिका पनि ...
अनौठो सम्मान : सार्वजनिक स्थलमा शौच गर्नेलाई मालाले सम्मान गर्दै नास्ताको व्यवस्था
सार्बजनिक स्थानमा शौच गर्नेलाई गाउँपालिकाले सम्मान गर्यो भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, मोरङको ...
बिश्वकै ठूलो च्याउ नेपालीद्वारा पोर्चुगलमा सार्वजनिक
विश्वमै दूर्लभ र बहूमूल्य प्रजातिको च्याउ नेपालीको कब्जामा ...
प्रचण्ड र बादलको यस्तो तस्विर बाहिरियो, यस्तो छ रहस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा म्याग्दी पुगेका छन् ...
मिथिलाञ्चलवासी छठको तयारीमा जुट्दै, यसरी गरिन्छ छठपूजा
अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने तराई मधेश तथा मिथिलाञ्चलवासी ...
चीनको अर्थ ब्यवस्था सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु
चीनको अर्थ ब्यवस्थामा केही रोचक कुराहरु छन् जुन कमै मानिसलाई मात्र थाहा छ । ...